इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी गठन « Pahilo News
प्रकाशित मिति : 18 May, 2018 7:59 am
साढे सात महिनादेखिको एकता प्रयासलाई निष्कर्षमा पु-याउँदै दुई ठूला वाम दल एमाले र माओवादी केन्द्रले बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेका छन् । ६९ वर्षको टुटफुटको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास ‘ब्रेक’ गर्दै जनमतका आधारमा इतिहासकै बलियो पार्टी गठन भएको छ । एकतासँगै शीर्ष नेताहरूले देशमा स्थिरता र समृद्धिका लागि नयाँ अध्याय सुरु भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभागृहमा भएको एकता घोषणासभामा नेकपाका सहअध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डले शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलन अब नयाँ इतिहास रच्दै अघि बढेको घोषणा गरे ।
तत्कालीन महासचिव पुष्पलालको नेतृत्वमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनस्र्थापित गरेर उनको सपना पूरा गरेको दुवै नेताको भनाइ थियो । गत १७ असोजमा पार्टी एकता र चुनावी तालमेलका लागि भएको ६ बुँदे सहमतिलाई ७ फागुनमा सातबुँदे सहमतिमार्फत थप मूर्त रूप दिँदै उनीहरूले एकतालाई निष्कर्षमा पु-याएका हुन् ।
दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन
नयाँ पार्टी दर्ताका लागि बिहीबार नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको छ । ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये बैठकमा उपलब्ध सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितका कागजात बोकेर सहअध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड आफै आयोग पुगेका थिए । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ पहिले नै आयोगमा दर्ता रहेकाले उनीहरूले पार्टीको नाम अन्डरलाइन (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) गरेका छन् । आयोगले बुझाइएका कागजात संविधान, ऐन र नियमावलीअनुसार भए–नभएको हेरेर ४५ दिनभित्र पार्टी दर्ता गर्न सक्ने जनाएको छ ।
घोलिएका छौँ, भेदभाव हुँदैन : केपी ओली, सहअध्यक्ष, नेकपा
हामी एक–अर्कामा मिसिएका होइनाैँ, घोलिएका छौँ । हिजो कुन पक्षबाट आएको थियो भनेर कसैप्रति पूर्वाग्रही, भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिनेछैन । समभावका साथ व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र भोलिका सम्भावना हेरेर जिम्मेवारी दिन्छौँ । अब नेपालमा कम्युनिस्टका लागि दुईतिहाइ सामान्य जोडघटाउको कुरो हो ।
अस्थिरता र अराजकताको युग सकियो : प्रचण्ड, सहध्यक्ष, नेकपा
अब देश अस्थिरता र अराजकताको युगबाट स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको युगमा प्रवेश गर्छ । इतिहासमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलनका समयमा ठुल्ठूला त्याग र बलिदान गरेका छन्, तर सत्तामा पुगेपछि भ्रष्ट र स्खलित भएका उदाहरण छन् । अब बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौती र सम्भावना बुझ्ने हुनेछ ।
पार्टी एकता टाइमलाइन
बिहान ८ बजे : बल्खुस्थित एमाले कार्यालयमा मदन–आश्रित स्मृति दिवस
बिहान ११ बजे : एकताको सन्देशमा दुई अध्यक्षद्वारा बालुवाटारमा वृक्षरोपण
बिहान ११ः३० बजे : बालुवाटारमा पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक
दिउँसो १ः३० बजे : बालुवाटारमा एमाले, खुमलटारमा माओवादी बैठक
दिउँसो ३ बजे : बालुवाटारमा संयुक्त बैठक र पहिलो बैठक सँगसँगै
अपराह्न ४ः३० बजे : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ताका लागि
निर्वाचन आयोगमा निवेदन
साँझ ५ः४५ बजे : राष्ट्रिय सभागृहमा एकीकरण घोषणासभा
साँझ ७ बजे : बालुवाटारमा दीपावली र रात्रिभोज
तीन अर्बको सम्पत्ति
एमालेसँग केन्द्रदेखि गाउँ, नगरसम्म करिब दुई अर्बको चलअचल सम्पत्ति छ । बल्खुमा नौ रोपनी एक आना जग्गा छ । त्यस्तै, पाँच अञ्चल र ६५ जिल्ला कमिटीका आफ्नै भवन छन् ।
दुवै पार्टीको स्वामित्वमा रहेको चलअचल सम्पत्ति अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्वामित्वमा आउने नेताहरूले बताएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यलाई शपथ
नेकपाले ४४१ केन्द्रीय सदस्यलाई शपथ खुवाएको छ । सुरुमा अध्यक्षद्वयले एकले अर्कालाई शपथ खुवाएका थिए । त्यसपछि उनीहरूले सबै केन्द्रीय सदस्यलाई अपरान्ह ४ बजेपछि सामूहिक शपथ खुलाएका हुन् । पार्टीको सिद्धान्त र विधानलाई इमानदारीसाथ पालना गर्ने शपथ खाएका छन् ।
इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी गठन –
नेकपाको स्थायी कमिटी : ४५ (दुई थप्न बाँकी)
एमालेका तर्फबाट : २५
केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेल, मुकुन्द न्यौपाने, सुरेन्द्र पाण्डे, छविलाल विश्वकर्मा, सत्यनारायण मण्डल, किरण गुरुङ, अमृत बोहरा, केशव बडाल र सोमनाथ अधिकारी प्यासी
माओवादी केन्द्रबाट : १८
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, अमिक शेरचन, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, देवप्रसाद गुरुङ, पम्फा भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल, मातृकाप्रसाद यादव, अग्नि सापकोटा, ओनसरी घर्ती, लेखराज भट्ट, शक्ति बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, लीलामणि पोखरेल र राम कार्की
ओली र प्रचण्ड सह–अध्यक्ष : आलोपालो बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमतिअनुसार नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड सह–अध्यक्ष रहेका छन् ।
४४१ सदस्यको नाम शुक्रबार टुंगिने
नेकपा ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको नाम भने शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । सदस्यहरूको वरीयताक्रम मिलाउन बाँकी रहेको तथा कतिपय नाम नै थपघट हुन सक्ने भएकाले बिहीबार सार्वजनिक नगरिएको नेता जनार्दन शर्माले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।
३ महिनामा तल्ला कमिटी पनि एकीकरण
अध्यक्ष प्रचण्डले तीन महिनाभित्र पोलिटब्युरो गठन तथा प्रदेशलगायत तल्ला तहका सबै कमिटी एकीकरण गरिसक्ने घोषणा गरेका छन् । केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ अर्थात् बढीमा १४५ सदस्यीय पोलिटब्युरो बन्नेछ ।
दुई वर्षपछि कतिऔँ महाधिवेशन टुंगो लाग्न बाँकी
एकीकृत पार्टीको एकता महाधिवेशन दुई वर्षपछि आयोजना गर्ने पार्टी एकता संयोजन समितिमा सहमति भएको छ । तर, अबको एकता महाधिवेशन कतिऔँ हुनेजस्ता विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ । ‘अबको एकता महाधिवेशन कतिऔँ भन्ने छलफलबाट टुंगो लाग्न बाँकी नै छ, पछि टुंगो लाग्नेछ,’ नेता जनार्दन शर्माले भने ।
शक्तिशाली पार्टीको महासचिव पौडेल
एमालेका पूर्वउपमहासचिव विष्णु पौडेल नेकपाको महासचिवको जिम्मेवारीसहित प्रभावशाली भूमिकामा उदाएका छन् । पार्टी एकताको सबै काममा सुरुदेखि नै दुवै अध्यक्षनिकट रहेर विश्वास जित्दै आएका पौडेलले महासचिवको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका हुन् । उनले सचिवालयको दैनिक कामको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । एमालेमा ८ वर्ष दुई कार्यकाल महासचिव रहेका ईश्वर पोखरेललाई पछि पार्दै पौडेलले एकीकृत पार्टीको संगठनमा पकड रहने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका हुन् । नयाँ पार्टीको संयुक्त बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पौडेलको नाम महासचिवमा प्रस्ताव गरेका थिए । स्रोतका अनुसार विधानमै महासचिवको केही अधिकारसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
तीन दिनमै यसरी भयो एकतामा चमत्कार
पछिल्लो समय एमाले–माओवादी एकताबाट टाढिएका खबर बाहिरिएका थिए । तर, एकाएक एकता भयो । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच २० वैशाखमा लगातार भएको तीन चरणको वार्तामै एकताका सबै विषय टुंगो लागेको हो । सोही दिन प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच पनि छुट्टै कुराकानी भएको थियो । राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदनका अंशहरूमा प्राविधिक पक्ष सच्याउने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षको विश्वासमा विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले पाएका थिए ।
उनीहरू कहिले एउटै गाडीमा त कहिले छुट्टाछुट्टै सुटुक्क बालुवाटार र खुमलटारमा बाक्लो आवतजावत गर्दै आएका थिए । दुवै नेताले २३ वैशाखमा नयाँ पत्रिकासँग एउटै स्वरमा ‘जेठको पहिलो हप्ता निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता भइसक्ने र संयुक्त बैठकबाट पार्टी एकीकरण सम्पन्न हुने’ बताएका थिए । ‘सबै पूर्वतयारीअनुसार नै एकता भएको हो, कुनै चमत्कार होइन,’ एकता प्रक्रियामा निकट रहेका एक नेताले भने, ‘मदन–आश्रित स्मृति दिवसमै एकता गरौँ भन्ने प्रचण्डकै चाहना हो, त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिम प्रक्रिया पूरा गरौँ भन्ने सहमति भएको थियो ।’ मोदीको भ्रमण सकिएलगत्तै १ जेठबाट ओली र प्रचण्डबीच बाक्लो संवाद हुन थालेको थियो । १ जेठमै एमाले नेता माधव नेपालसँग पनि कुराकानी भयो र दुवै नेताको थप कुराकानी भएपछि एकताको अन्तिम टुंगो लागेको हो ।
नेकपाको पहिलो केन्द्रीय कमिटीमा के–के भयो ?
पहिलो चरण : सुरुमै दुवै पार्टी विघटनको घोषणा
० प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा स्वकीय सचिवालयसँगै रहेको हलमा साढे ३ बजेबाट सुरु भएको दुवै पार्टीको संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्दै तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी विघटनको घोषणा गरे ।
दोस्रो चरण : अध्यक्ष, हाइकमान्ड र महासचिव घोषणा
० विघटनअघि उनले एमाले र माओवादी केन्द्र भर्खरै अहिलेको हैसियतमा नरहने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय संरचना, स्थायी समिति, सचिवालय र महासचिवको नाम घोषणा गर्दै आफू र प्रचण्ड दुवै प्रमुखका रूपमा अध्यक्षमा रहने बताएका थिए ।
तेस्रो चरण : नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरूको सामूहिक शपथ
० विघटनको घोषणालगत्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक सुरु भयो । ओली र प्रचण्डले सबै सदस्यलाई सामूहिक रूपमा उठाएर शपथ खुवाए । शपथको लिखित व्यहोरामा हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय सदस्यले लाइन लागेर बुझाए, दुवै पार्टीको संयुक्त बैठक र नयाँ पार्टीको पहिलो बैठक करिब एक घन्टामै समापन भयो ।
पार्टीको नाम : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
झन्डा : हँसिया–हथौडा
चुनाव चिह्न : सूर्य
अन्तरिमकालीन कार्यक्रम : समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद
अन्तरिमकालीन मार्गदर्शक सिद्धान्त : माक्र्सवाद–लेनिनवाद
जबज, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद र माओवाद : एकता महाधिवेशनमा फैसला
नेकपा गठनबारे के भन्छन् अन्य दल ?
डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री, कांग्रेस
दुई कम्युनिस्ट पार्टी एक भएकोमा शुभकामना दिन चाहन्छौँ । हिजो अलग पार्टीका रूपमा हुँदा पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका हौँ, फेरि पनि हुन्छ । अहिले एक भएकाले उनीहरूले हामीलाई उछिनेका छन् । तर, हामी आत्तिँदैनौँ, हडबडाउँदैनौँ ।
देशलाई निकास र विकास दिए सकारात्मक
सिपी मैनाली, महासचिव, नेकपा माले
पार्टी एक भएर ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेपछि अब स्थिर सरकार, स्वावलम्बी देखियोस् । आर्थिक रूपमा सम्पन्न देश बनाउने, प्रभावकारी विकास गर्ने, बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हुन नदिने ढंगले अघि बढ्ने हो भने यो एकीकरणलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । साझा कुरामा सहकार्य हाम्रो हुन सक्छ ।
समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्छौँ
चुनावमा सहकार्य गर्दा पार्टी एकतासमेत गर्ने कुरा भएको थियो । जनताका अगाडि गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका थियौँ । त्यसैअनुरूप उनीहरूले एकता गरेका छन्, स्वागतयोग्य छ । हामी समर्थनमा वक्तव्य जारी गर्छौँ । हामी सहकार्य गर्छौँ, तर पार्टी एकताको सोचाइमा छैनौँ ।
सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ
अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम
लामो समयदेखि टुटफुटको राजनीति गर्दै आए पनि अहिले दुई ठूला कम्युनिस्ट दल मिलेकामा हाम्रो दलले सकारात्मक ठानेको छ । यो पार्टीले देशको हित र समृद्धिका लागि काम गरोस् ।
अरूले पनि सिक्नुपर्छ
अध्यक्षमण्डल सदस्य, राजपा
लामो टुटफुटको शृंखला भोगेका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नु खुसीको कुरा हो । संघीयता, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन दलहरू मिलेरै अगाडि बढ्नुपर्छ । उहाँहरूको अभ्यासबाट अरूले पनि सिक्नुपर्छ ।
दक्षिणपन्थी संशोधनवादी गठजोड
मोहन वैद्य, महासचिव
नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी
माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद तथा अवसरवाद हुँदै संसदीय मूल प्रवाहको एमाले प्रतिक्रियावादमा समाहित भएको छ । यो दक्षिणपन्थी संशोनधवादी गठजोड हो ।
नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको ट्विट
एमाले–माके एकता हुन लागेकोमा दुवैलाई बधाई र शुभकामना । तर, केही अनुत्तरित प्रश्न : के वानरहरू पुच्छर काटेकै भरमा मान्छे भएका हुन् ? गणितमा माइनस एक र माइनस एक जोड्दा माइनस दुई हुन्छ, माइनस एकको मूल्य धेरै कि माइनस दुईको ? सर्वहारा अधिनायकत्व छाडेपछि कम्युनिस्ट नाममा मोह किन ?